भोजपुरका एक पुरुषको खानै नपाएर झापामा मृत्यु — KhabarTweet
भोजपुरका एक पुरुषको खानै नपाएर झापामा मृत्यु
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र २३, २०७७ समय: १९:५७:०७
झापा – भोजपुर मुलघर भएका राजकुमार जोगीको को झापाको चारआली–बुझाबारी सडकखण्डमा खान नपाएर मृत्यु भएको छ । केही समय अघि पूर्व पश्चिम राजमार्गको चारआली सडक खण्डको कल्भर्टमुनी बस्दै आएका राजकुमार जोगी र मीना खड्का । फाइल तस्बिर
अन्दाजी ४५ बर्षीय जोगी केही दिनदेखि भोकै रहेको र खान नपाएरै उनले ज्यान गुमाउनु परेको स्थानीय प्रकाश राजवंशीले बताए । उनले भने, ‘केही दिनदेखि उनी भोको थिए रे । भोको पेट, चिसो भुइँको सुताईकै कारण उनको ज्यान गएको हो ।’
भोजपुर मूल घर भएका जोगी विगत दुई दशकदेखि चारआलीमै बस्थे । उनलाई नजिकबाट चिन्ने स्थानीयका अनुसार पहिला बुबा–आमासँगै डेरामा बस्थे । फेरि लगाउने पेसाबाट गुजारा चलाउँथे । बुबा–आमा बितेपछि उनी एक्लिए । केही समय पुस्तौनी पेसा गरे । तर, लामो समय गर्न सकेनन् । पछि डेरा पनि छाडे । खुला आकासमै रात गुजार्थे । जोगीले कहिले जंगलमा त कहिले सडकका पेटीमा रात गुजारेको स्थानीयको भनाइ छ ।
जोगीले लकडाउन सुुरु भएपछि सडकमै माग्ने उनीजस्तै महिला झापा धुलाबारीकी ५२ वर्षीया मीना खड्कासँग बिहे पनि गरेका थिए । मीना चारआलीको पाउ पाथिभरा मन्दिर परिसरमा मागेर गुजारा गर्थिन् । उनी पनि मन्दिर आसपासै भेटिन्थे । मन्दिर आसपासमै भेटिएका यी असहायको मन मिलेपछि बिहे गरेका थिए ।
बिहे त गरे । तर, कहाँ बस्ने ? समस्या थियो । डेरा खोजे पाएनन् । अन्तत: पाउ पाथीभरा मन्दिर अघिल्तिरको सडक कल्भर्टलाई डेरा बनाए । ‘कसैले डेरा नदिएपछि कहाँ जाने र? मर्नु भन्दा बहुलाउन निको,’ केही समयअघिको कुराकानीमा उनले भनेका थिए ।
फोहोरको डंगुरले भरिएको कल्भर्टमा रात बिताउँथे । कसैले दिए खान्थे नत्र भोकै सुत्थे । केही समय अघि कल्भर्टबाट समेत उनीहरु लखेटिए । केही समययता कालीझोडा जंगल नजिकको चौतारो उनीहरुको घर थियो । त्यहीँ जोगीले अन्तिम श्वास फेरे । ‘रातिसँगै सुतेका थियौं,’ मीनाले भनिन्, ‘बिहान त उनी बितिसकेछन् ।’
जोगीको शव पोस्टमार्टमका लागि मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर लगिएको प्रहरीले जनाएको छ । कान्तिपुरवाट